काठमाडौँ को मैतिदेवीमा भाडामा बस्ने युवामा कोरोना पु`ष्टि, पाटन अस्पताल लगियो ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/काठमाडौँ को मैतिदेवीमा भाडामा बस्ने युवामा कोरोना पु`ष्टि, पाटन अस्पताल लगियो !
काठमाडौं, ७ जेठ । काठ`माडौँको मैति`देवीमा पनि एक जनामा कोरोना सं’क्रम’ण पु`ष्टि भएको छ । मैति`देवीको क्षेत्रमा को`रोना पु`ष्टि भएपछि कमल पोखरी प्रहरी वृ`त्तले सो क्षेत्र सिल गर्न लागेको छ ।
मैति`देवीमा भाडामा ब`स्ने ब्य`क्तिमा बुधबार कोरोना पु`ष्टि भएको हो । संक्र`मितलाई पाटन अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
मैतिदेवीमा डेरा गरी बस्ने दुई युवामध्ये एक जनामा कोरो`ना पु`ष्टि भएको छ । संगै ब`स्ने अर्का एक जनाको रि`पोर्ट आउन बाँकी छ। संक्र`मित युवा रामेछापको भएको र उनी वैशाख ३० गते रामेछाप बाट काठ`मा`डौँ आएको प्रहरी`ले जना`एको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्रालयले बुधबार थप २५ जनामा कोरोना संक्रम’ण देखिएको बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा, विकास देवकोटाले २५ जनामा कोरोना संक्र` मण पु`ष्टि भएको बताए।
बाँकेको ६, धनकुटामा ५, क`पि`लब`स्तु`मा १३, नवलपरासी पश्चिममा १ जना संक्र`मित भेटिएका हुन , यो सँगै कुल संक्र मितको सं ख्या ४२७ पुगेको प्रव`क्ता देव`कोटाले जानकारी दिए। बुधवार क`पिलव`स्तुमा मात्र १३ जनामा कोरोना पु`ष्टि भएको छ ।
जसमा ३ वर्षका बच्चा पनि रहेका छन् । कपि`लब`स्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकामा जना र विजय`नगर गाउँ`पालिकामा १३ जनामा कोरोना पु`ष्टि भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।